ငရုတ်သီင်္းနှင့် ကျန်းမာရေး ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငရုတ်သီးဟာ ရုက္ခဗေဒအရ Solanaceae family ထဲက Genus Capsicum ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Capsicum မှာ species များစွာရှိတဲ.အနက် ဒီနေ. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသုံးအများဆုံး species က ၄၆ မျိူး ရှိပါတယ် အဲ.ဒီအထဲမှာ လူသိအများဆုံး species ကတော. Capsicum annum ဖြစ်ပါတယ် ၊ annum ဆိုတဲ. အဓိပ္ပာယ်ကတော. တနှစ်ပါတ်လုံး ပေါက်ရောက်တဲ. အပင်ကိ်ု ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်သီးဟာ တကမ္ဘာလုံး အသုံးများတဲ. မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်အရပ်သုံး ဝေါဟာရ အနေနဲ. Chili pepper လို.ခေါ်ပါတယ်၊ ပြီးတော. အရောင်ပေါ် မူတည်ပြီး အစိမ်းရောင် ရှိရင် Green pepper ၊ အ၀ါရောင် ဆိုရင် Yellow pepper အနီရောင်ဆိုရင် Red pepper စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လေ. ရှိပါတယ်။ သူ.ရဲ. Botanical name ဖြစ်တဲ. Capsicum လို.ပြောရင်လဲ သိတဲ.လူများပါတယ်၊ အမေရိကားမှာတော. ငရုတ်သီးပွပွ အကြီးကြီးတွေကို ခေါင်ေးလာင်းနဲ.တူလို. Bell pepper လို.ခေါ်ကြပါတယ်။ ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ. ဂျာမနီတို. ပြင်သစ် တို.လို နိုင်ငံကျရင်တော. paprika လို.ပြောမှ သိကြပါတယ်၊ Chili ဆိုတဲ. ဝေါဟာရကတော. မက္ကဆီကို ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးမှာ အရောင်တွေ ကွဲပြားနေတာ ဘာကြောင့်လဲ
ငရုတ်သီးရဲ. အပြင်ဆုံးအလွှာမှာ ရှိတဲ. ဓါတ်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်တွေ ကွဲ သွားတာဖြစ်ပါတယ်၊ အစိမ်းရောင်ကတော. Chlorophyll ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အ၀ါရောင်ကတော. Carotenoid အထူးသဖြင့် alpha carotene တွေကြောင့် ဖြစ်ပြီး အနီရောင်ကတော. capsanthin ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို.ရဲ.ပါဝင်မှူ အချိူးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော. ကြားမှာရှိတဲ. အရောင်တွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးကို ဘယ်တုံးကတည်းက လူတွေ စတင်အသုံးပြုခဲ.တာလဲ
လူတွေ ငရုတ်သီးကို စတင် စိုက်ပျိူးတဲ. အလေ.အထကတော. BC 7500 လောက်ကတည်းကဆိုတော. နှစ်ပေါင်း၉၅၀၀ ကျော်ပြီလို. ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူ.ထက်လဲ စောနိုင်တယ်လို. သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်၊ အမေရိကားတိုက်မှာ စသုံးခဲ.တယ်လို. သိရပါတယ်၊ ဒီကနေ. မက္ကဆီကို နိုင်ငံ အီင်္ကွေဒိုး( Ecuador) နိုင်ငံ ဒေသတွေ မှာ နေထိုင်တဲ. ရှေးလူသားတွေက စတင် သုံးခဲ.ကြပါတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှ တောင်နဲ. မြောက်အမေရိကားကို ပြန်.နှံ.ရောက်ရှိပြီး အမေရိကားမှာ ရှိတဲ. ငရုတ်သီးကို Christofer Columbus ကနေ တစ်ဆင့်မှ အာရှတိုက်ကို ဆက်လက်ပြန်နှံ.ရောက်ရှိခဲ.တယ်လို. သိရပါတယ်။
ငရုတ်သီးမှာ ဘယ်လို အဟာရဓါတ်မျိူးတွေ ပါဝင်လဲ
ငရုတ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ. အဟာရဓါတ်တွေက တော.
1.1 Capsaicin ( 32 - 38 %)
1.2 Dihydrocapsaicin( 18 - 52%)
ဒီဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ငရုတ်သီးရဲ. အဓိက အာနိသင်ဖြစ်တဲ. ပူခြင်း၊ စပ်ခြင်း ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
2. Carotenoid ( 0.3- 0.8 % )
2.1 Capsanthin ( dark red)
2.2 Alpha- carotene( yellow)
2.3 Violaxanthine ( orange)
ဒီဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ငရုတ်သီးကို အနီရောင် ၊ အ၀ါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်တွေ ကို ပေးပါတယ်။
3.2 Luteolin-7-0 glucoside
ဒါတွေကတော. ဆေးဖက်ဝင်တဲ. အာနိသင်ကို ပေးပါတယ်။
4. Volatilieoil ( 1.1% )
4.12methoxy -3- isobutylpyrazine
4.2 N -13- methyl- tetraacetyl acetamide ( capsiamide )
ဒါကတော. ငရုတ်သီးကို ငရုတ်ဆုံထဲ ထည်.ထောင်းရင် ထွက်လာတဲ. မွှန်တဲ. သတ္တိကိုပေးတဲ. ဓါတ်ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Vitamin- C ကတော. ငရုတ်သီးစိမ်းမှာပဲ ပါပါတယ်။
တချို. ငရုတ်သီးတွေ လုံးဝမစပ်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ( ဥပမာ- ငရုတ်သီးပွပွကြီးများ)
ငရုတ်သီးစပ်ဖို.အတွက် Capsainoid တွေ ပါဖို. လိုပါတယ် ၊ ငရုတ်သီးအမျိုးမျိုး ( sweet pepper) တွေ ကျတော. Capsainoid တွေ လုံးဝမပါဝင်တဲ.အတွက် မစပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငရုတ်သီးဟာ ဆေးဖက်ဝင်တဲ.အသီးလို. ပြောလို.ရပါသလား
ရပါတယ်။ အင်မတန်မှ ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို.ပြောလို.ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ. တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ. စကားအတိုင်း အတော်အသင့် စားတာ ကောင်းပေမဲ. တရားလွန်စားရင်တော. မကောင်းဘူးပေါ.။ ငရုတ်သီးရဲ. အာနိသင်တွေကို သရုပ်ခွဲကြည်.ရင် ပုံမှန်စားသူတွေ အနေနဲ.
၁။ Good appetizer- အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ပိုမိုအရသာရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဒါကတော. အားလုံးသိပြီးသားပါ၊ ငရုတ်သီးမပါရင် ဘာမှ စားလို. အရသာမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို. လူမျိုးတွေက ပိုပြီးတော.သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
၂။ Antibiotic effect- ငရုတ်သီးဟာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးတွေကို သေစေပါတယ်၊ ငရုတ်သီး ထဲမှာ သာမန်အားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားတွေ မပေါက်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဟင်းထဲ တည်.ချက်ရင်လဲ ဟင်းထဲမှာ ရှိတဲ. ရောဂါပိုးတွေကိုပါ သေစေနိုင်ပါတယ်။ သူသေစေတဲ.ရောဂါပိုးတွေကတော. Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes. Clostridium tetani, Streptococus pyogene တို.ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ.အပြင် အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်စေတဲ. H- pylori ကိုပါ သေစေနိုင်တဲ. အာနိသင်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ. fungus တွေကိုတော. မသတ်နိုင်ပါ၊ ဒါကြောင့် ငရုတ်သီးဟာ မှိုတတ်လွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ပါဝင်တဲ. Carotenoid တွေကနေ Vitamin A အနည်းငယ်ရစေနိုင်သလို Vitamin C ကိုလည်း အနည်းငယ်ရစေပါတယ် ၊ Vitamin C ကတော. အစိမ်းမှာပဲ ရပြီး ငရုတ်သီး အခြောက်မှာ မရနိုင်ပါ။
၄။ Analgesic effect- နောက်အရေးပါတဲ. အာနိသင်တစ်ခုကတော. အကိုက်အခဲ သက်သာစေတဲ. အာနိသင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော. ငရုတ်သီးကို ဒီအတိုင်းစားရုံနဲ. မရနိုင်ပါဘူး။ သဘာဝဆေးဝါးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ. ဆေးဝါးစက်ရုံတွေမှာ ငရုတ်သီးရဲ. အဆီအနှစ်တွေကို ထုတ်ပြီး Capsaicin ကို အသုံးပြုမှ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်းဆေးတွေမှာ ထည်.သွင်းပြီး အသုံးပြုရပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ ရောင်ရမ်းနာကျင်တာတို. အဆစ်အမြစ်တွေ ရောင်ရမ်းနာကျင် ကိုက်ခဲတာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဒီလို ရောင်ရမ်းတဲ. နေရာမှာ substance- P ဆိုတဲ. ဓါတ်တစ်မျိူး ထုတ်ပါတယ်။ အဲ.ဒီ ဓါတ်ပစ္စည်းကြောင့် နာကျင်မှူနဲ. ရောင်ရမ်းမှုကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။။ ဒီလိုမျိူး substance P တွေ ထွက်ဖို. လှုံ.ဆော်တာက calcium influx ဖြစ်ပြီး ဒီလိုဖြစ်ဖို. C - type banilloid receptor ( VR1 ) ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ Capsaicin ဟာ အဲ.ဒီ receptor အလုပ် မလုပ်တော.တဲ. အတွက် substance P ထပ်မထုတ်နိုင်တော.ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် အရောင်ကျပြီး နာကျင်မှူလည်း သက်သာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ငရုတ်သီး အစိုနဲ. ငရုတ်သီး အခြောက် မှုန်. ဘယ်ဟာက ပိုပြီး ဆေးဘက်ဝင်တယ် အန္တရာယ်ကင်းပါသလဲ
ငရုတ်သီးအစို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကတော. အတော်အသင့် စားရင် ဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးလို.ပြောလို.ရပါတယ်။ သိပ်များရင်သာ ရင်တွေပူလာပြီး ဗိုက်နာတာမျိူး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော. ၀မ်းသွားတဲ. အခါ စအိုဝတစ်ဝိုက်မှာ ပူစပ် ပူလောင်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ငရုတ်သီး ခြောက်ကတော. သန်.သန်.ရှင်းရှင်းနဲ. ဘေးကင်းအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော. သိပ်ပြသနာမရှိပေမဲ. သေသေချာချာမလုပ်ရင်တော. အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။ အဓိက အန္တရာယ်ကတော. Aflatoxin လို.ခေါ်တဲ. မှိုဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်သီး ခြောက်ကို သေသေချာချာ ခြောက်အောင် မလှမ်းရင် အထဲမှာ မှိုလိုက်တတ်ပါတယ်၊ ပိုဆိုးတာက ရောင်းတဲ.သူတွေဟာ အလေးချိန်တိုးအောင် ရေနဲ.ဖျန်းပေးတဲ. အလေ.အကျင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရေနဲ. ဖြန်းလိုက်ရင် ခဏလေးနဲ. မှိုတတ်ပါတယ်။အဲ.ဒီမှိုတွေဟာ မျက်စိနဲ. မမြင်နိုင်တော. အမှုန်.ကြိတ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကို စားမိရင် ကင်ဆာမျိူးစုံ အထူးသဖြင့် အသည်းကင်ဆာဖြစ်ဖို. အလားအလာ အလွန်များပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားရတဲ. အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာB ပိုး C ပိုး ဗိုင်းရပ်စ် ရယ် Aflatoxin ရယ် အဓိက အကြောင်းအရေင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ငရုတ်သီးမှုန်.ဆိုတာလဲ မသုံးမဖြစ်သုံးနေကြရလေတော. အန္တရာယ်ကင်းတဲ. တံဆိပ်ကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုတတ်ဖို. လိုပါတယ်။ ကိုယ်.ဟာကိုယ်အိမ်မှာ Home made ငရုတ်သီးခြောက်ကို မှိုမတတ်အောင် လုပ်စားရင် တော. အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ငရုတ်သီးနဲ. မတည်.သော ဆေးဝါးများ
ရုတ်သီးပါတဲ. အစာစားရင် တွဲမသုံးသင့်တဲ. အနောက်တိုင်းဆေးတွေ အနေနဲ.ကတော.
၁။ Aspirin ဒီဆေးရဲ. side effect ကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက လေ့လာတွေ.ရှိချက်အရ Aspirin ဆေးရဲ. side effect ဖြစ်တဲ. အစာအိမ်နဲ. အူနံရံ တိုက်စားမှူကို ပိုမို ဆိုးစေပါတယ် Aspirin ပါတဲ. ဆေးသောက်ရင် အစာစားပြီးမှ သောက်ပါလို. ဆရာဝန်တွေက ညွှန်လေ.ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးတာက အဲဒီအစားအစာထဲမှာ ငရုတ်သီးအစိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မပါဖို. လိုပါတယ်။
၂။ သွေးကျဲစေတတ်သော ဆေးများဖြစ်တဲ. Aspirin, Antiplatelet, Anticoagulants, Heparin တွေကို သုံးနေတဲ.သူတွေမှာ ငရုတ်သီးကို လျှော.စားရပါမယ်၊ ဘာလို.လဲဆိုတော. ငရုတ်သီး ကိုယ်တိုင်က သွေးကျဲစေတတ် သတ္တိရှိတဲ. အတွက် သွေးကို လိုတာထက်ပိုကျဲပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ သွေးထွက်လွန်စေနိုင်လို.ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော. အင်မတန် အရေးကြီးတဲ. အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ACE inhibitor လို.ခေါ်တဲ. သွေးတိုးရောဂါမှာ အသုံးပြုတဲ. ဆေးနဲ. တွဲစားရင်ထူးခြားတဲ. side effect ရတတ်ပါတယ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ.တဲ. လေ့လာသုတေသန ပြုချက်အရ ဒီဆေးတွေ သောက်သုံးနေတဲ.သူတွေ မှာ ဆေးနဲ. ငရုတ်သီး နဲ. စားချိန်နီးရင် ရုတ်တရက် ချောင်းဆိုးလာတတ်တယ်လို. ဆိ်ုပါတယ်။
ငရုတ်သီး မစားသင့်တဲ. အခြေအနေ
ငရုတ်သီး အစိုကတော. ပုံမှန်စားရင်ဘာမှ ပြသနာ ကြီးကြီးမားမား မရှိတော. သိပ်ရှောင်စရာ မလိုပါဘူး၊ ငရုတ်သီး အခြောက်မှုန်.များများမစားသင့်တဲ. အခြေအနေကတော.
၃။အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်း ၊ တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ
၅။ခန္ဓာကိုယ်မှ သွေးထွက်လွန်ရောဂါ ရှိသူများ
ဥပမာ- Hemophilia, Leukemia, Thrombocytopenia.
ငရုတ်သီး ပါတဲ. လိမ်းဆေးတွေ မလိမ်းသင့်တဲ. အခြေအနေ
ငရုတ်သီး Capaisin ကိုအဓိကအားဖြင့် ပရုတ်ဆီတို. တေဇာဘမ်းတို.လို အကိုက်အခဲ ပျောက်လိမ်းဆေးတွေမှာ အသုံးပြုလေ.ရှိပါတယ်။အဓိကအနေနဲ.
၁။ မျက်စိထဲမ၀င်အောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ်၊၀င်ရင် မျက်စိ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်၊ ငရုတ်သီးလဲ ၀င်လို.မရပါ။
၂။ အနာတွေမှာ မလိမ်းရပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမှာ မလိမ်းရပါဘူး။
၃။ ပုရွက်ဆိတ် တို. ခါချဉ်တို. စတဲ. အဆိပ်ရှိတဲ. သတ္တ၀ါတွေ ကိုက်လို.ရောင်တာ နာတာဆိုရင် မလိမ်းရပါဘူး၊ အဆိပ်တွေ အလွယ်တကူ ပြန်.နှံ.အောင် အားပေးလို.ဖြစ်ပါတယ်။
Dr Khin Maung Lwin( FAME)